Somalia oo 7 walxood ka faa’iidaysa daymaha laga cafinayo | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somalia oo 7 walxood ka faa’iidaysa daymaha laga cafinayo
Somalia oo 7 walxood ka faa’iidaysa daymaha laga cafinayo
(Washington, DC) 20 Okt 2019 – Agaasimaha Sanduuqa Caalamiga ee Lacagta Kristalina Georgieva ayaa sheegtay in ay taageereyso dadaalka ay Soomaaliya ugu jirto deyn cafinta iyadoo u maraysa barnaamijka dalalka saboolka ah ee deynta lagu leeyahay.
Cafinta daynta oo sida lagu wado hirgeli doonta dabayaaqada sanadka soo aaddan, ayaa asaasi u ah inay Somalia qaaddo dhowr tillaabo oo asaasi u ah soo kabashada Somalia, waxaana ka mid ah:
1 – Inay dayn hor leh qaadato.
2 – Daabacaadda lacag uu dalku yeesho.
3 – Fulinta mashaariic waawayn.
4 – In dalku helo maalgashi caalami ah.
5 – In la helo tixraac maaliyadeed oo sugan.
6 – Qaadista cunaqabataynta
7 -Dhismaha iyo hubaynta ciidamada qaranka.
Previous articleDF Somalia oo lagu SALUUGEY qaabka ay xilliyadii dambe u waddey dacwadda badda
Next articleGOOGOOSKA: Man Utd vs Liverpool 1-1 (Derby-gii reer woqooyiga oo isku daaley)